Virgil van Dijk oo seegi kara kulanka Chelsea iyo tababare Klopp oo ka hadlay – Gool FM
Virgil van Dijk oo seegi kara kulanka Chelsea iyo tababare Klopp oo ka hadlay
Liibaan Fantastic September 28, 2018
(Liverpool) 28 Sab 2018 Daafaca Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa seegi kara kulanka adag ee kooxdiisu ay u safrayso habeen dambe kooxda Chelsea.
Tababare Klopp ayaa sheegay inay haboon tahay in laga war sugo xaalada Virgil van Dijk maadaama ilaa haatan uusan ka qayb qaadan tababarka kooxda.
Wuxuuna intaa ku daray in kooxdiisu ay haysato badalkiisa, wuxuuna si wayn u amaanay Lovren oo aan si joogto ah u ciyaarin bilowga xiliciyaareed kaan.
Klopp oo ka hadlay dhaawaca Virgil van Dijk ayaa yiri:
“Waxaa haboon inaan sugno, ilaa haatan tababar lama uusan qaadan kooxda, haddii uu diyaar yahay oo uu ciyaari karo waa uu ciyaarayaa, haddii kale waxaan haysanaa dooqyo kale taas oo ah wax wanaagsan”.
“Virgil van Dijk waa laacib heer sare ah, taasi wax shaki ah malahan, Lovren 10-isbuuc kadib ayuu ciyaaray kulankiisii ugu horeeyay, kadib waqtigaas dheer wuxuu soo bandhigay qaab ciyaareed aan la rumaysan karin”.
Marcelo oo seegaya kulanka Atletico Madrid (Imisa kulan ayuu maqnaanayaa?)
“Mourinho iyo Conte waxay i siin jireen xuriyad la mid ah tan Maurizio Sarri”… Eden Hazard